Rumeyso waxyaabaha aad aaminsantahay, waxaan ugu yeernaa (waalli) oo aan aaminsanahay waxyaabaha kale ee sonkorta ah, waxaan ugu yeernaa (diin) "Thomas Sankara: Dhammaan dadka madowga ah / Afrikaanka ah ee dhaha Ilaah ayaa mas'uul ka ah Ciise iyaga jeclaada, waa inay marka hore aqriso buuggan oo ku qornaa 1842 oo uu qoray Pastor Jones "Sidee Looga Sameeyaa Negro Christian" (Jones Charles Colcock, 1804-1863) "| KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 13, 2020 03: 13 No Comments
Sida loo xakameeyo midabka madow: looma baahna in laga faalloodo, wax walbaa waxay ku jiraan cinwaanka BOOK iyo MUUQAALKA: "Had iyo jeer waa Ilaaha Masiixiyiinta ah ee ku dhiirigaliyay buuggan faa'iidada madow / Afrikaanka? "
Buuggan, Wadaad Jones wuxuu si sahlan u sharraxayaa ka hor dhammaadka addoonsiga, qofku waa inuu ku guuleystaa qabashada ninka madowga ah isagoo uga mahadcelinaya diinta sayidkiisa. Wuxu yidhi sida loo sii wado taranka adoomada madow iyo waqtigan iyadoon la helin wax iska caabin ah. Waa lagama maarmaan in laga jaro cibaadadooda Afrikaanka ah taas oo ay lama huraan tahay in kor loogu qaado darajada shaydaannimada, si looga jaro gabi ahaanba xididdada afrikaanka ah sidaa darteedna ka dhigo kuwo jilicsan oo hawlkar ah.
Waxaa loo qoray in addoonsiga Madow ee caabuda nin caddaan ah sida Ilaahiisa (Ciise) uusan mar dambe u arki doonin ninka cadowga inuu yahay cadowgiisa, isla markaana uu ka lumi doono fikirka aargudashada ama si fudud u muuqashada ku riyaaqa midhihiisa. barwaaqada dhulka. Si uu isu tacsiyeeyo isagoo ku riyoonaya waxa jannada ku sugaya.
Schizophrenics waqtiyada kale sida rasuul Bawlos, Yooxanaa, Matayos, Muuse, Ciise, Muxammad, iwm. Waxay noqdeen nebiyo maxaa yeelay xarumaha dhimirka ma jiri jireen wakhtigoodii. Tani waa sababta aan had iyo jeer u maqalno wax ku saabsan DARAACADA kaliya dalal dhowr qarniyo ka dambeeya dib u dhaca.
"Sida loo sameeyo Negro Christian": waa buug ay akhriyaan dhammaan dadka madowga ah / Afrikaanka oo isku sheegaya inay yihiin Masiixiyiin ama Muslimiin!
Aug12 10: 57